musha » Intersex Zviwanikwa
Directory Category: Intersex Zviwanikwa
CXYCourtney- My Intersex Nyaya | Courtney Skaggs (YouTube vhidhiyo)
Uyu ndini. Ndakahwanda kwemakore makumi maviri nemanomwe uye ikozvino ndave kudada zvakakwana kuti ndirarame hupenyu hwangu pachena. Ndiri intersex. Muviri wangu wakanaka. Ini NDINOGONESESA! Dzvanya zvinongedzo pazasi kuti udzidze zvimwe uye upe. http://cxycourtney.com http://linktr.ee/courtney.skaggs
Ma intersex Latter-day Saints anotambura sei kugara mune 'mbiri dzevakadzi'
"Courtney Skaggs aigara achinzwa, zvakanaka, akasiyana nevamwe vasikana vachikura, asi iye aisaziva chaizvo kuti akasiyana zvakadii kusvikira aita kuti shiri-uye-nyuchi dzitaure nevabereki vake sezvaaida kuyaruka."
Verenga zvimwe paSalt Lake Tribune: https://www.sltrib.com/religion/2020/10/24/i-will-never-fit-how/
Inosanganisira Inongedzo Ekuremekedza Vanhu vane Intersex Misiyano
Inotakurika PDF Gwaro
NDIVANAANI VANHU VASHURE?
Intersex vanhu vane zvakasarudzika misiyano yehunhu hunhu hwakasiyana kubva pakurapa nemagariro magariro evanhukadzi kana evarume miviri. Intersex izwi remburera remhando dzakasiyana dzehunhu hwakasiyana hunogona kusarudzwa nehunhu, pakuzvarwa, panguva yekuyaruka uye pane dzimwe nguva. Hunhu uhu hunosanganisira uyerogenensensitivity, congenital adrenal hyperplasia, 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase 3 kushomeka, uye zvimwe zvakawanda.
Nekuti miviri yavo inoonekwa seyakasiyana, intersex vanhu vari panjodzi yekushurirwa, mhirizhonga uye hunokuvadza maitiro, kusanganisira kumanikidza kana kumanikidza kurapwa kurapwa kunoitirwa kuti miviri yavo ive yakajairika mukadzi kana murume.
Zvepabonde maitiro: epanyama maficha ane chekuita
kuita bonde, kusanganisira genitalia uye mamwe maitiro epabonde uye ekubereka, ma chromosomes, mahormone, uye zvechipiri maficha anobuda mukuyaruka.
Zvepabonde: zviri pamutemo kana zvemagariro chinzvimbo zvichitangira pabonde zvinoonekwa pakuzvarwa. Mune zvimwe zviitiko, vacheche vane misiyano yepabonde vanogona kuitiswa bvunzo nemiedzo kuti vatange bonde. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kuedza kunoitwa kuona kusiyana kwecacheche pakati pevacheche uye pamwe nekuzivikanwa kwechikadzi mune ramangwana. Pfungwa dzakajairika nezvekuti mitumbi yevana inofanira kutaridzika sei inoita chinzvimbo chakakosha pabasa rekuita bonde.
Kukanganisika kwekusimukira pabonde: izwi rekunyomba rehunhu hwepabonde hwakaunzwa zvichitevera kukokwa- chete musangano wekiriniki muna 2005. Vamwe vanhu vanofarira izwi rekurudziro 'misiyano yekukura kwepabonde'.
Endosex: izwi rinoreva "asiri-intersex". Izvi zvinogona kubatsira mukubvuma kuti intersex vanhu vakura zvakakwana kuti vataure zvakasununguka hunhu vangave vanoita zvepabonde uye vanogona kuziva nezvebonde rakapihwa pakuzvarwa (inowanzonzi cisgender).
InterAct - Vamiriri veIntersex Vechidiki
Chii chinonzi intersex?
Intersex izwi remamburaira rekusiyana kwehunhu hwepabonde kana hutachiona hwekubereka. Vanhu vanozvarwa vaine iyi misiyano kana kuivandudza muhudiki. Kune misiyano yakawanda inogona kuitika mujenitalia, mahormone, anatomy yemukati, kana chromosomes.
Dambudziko nderekuti, miviri yevana inowanzo shandurwa nekuda kwavo nekuda kwekunyara uye kushorwa. Izvi zvinosanganisira kuvhiya kugadzira vagina, kudzikisa clitoris, kana kubvisa testes, kazhinji isati yasvika makore maviri. Takashanda nemazhinji emasangano epamusoro ekodzero dzevanhu epasi rese, uye vese vanobvumirana: kuvhiya kushandura hunhu hwevatano kunofanirwa kuve sarudzo yemunhu.
Ndosaka interACT ichishandisa hunyanzvi hwepamutemo uye mamwe maratidziro ekurwira kodzero dzevanhu vevana vanozvarwa vaine misiyano yesikarudzi yavo, chromosomes, mahormone, uye anatomy yekubereka.
»Mibvunzo inowanzo bvunzwa
»Dzidza kuti vabatsiri vanogona sei kutora chikamu
»Mushandi wekurapa? Ona yedu inosimbisa gwara remutemo wechipatara
»Ita mupiro wekutsigira basa redu
InterConnect Tsigiro | Tsigiro - Gamuchira - Dzidzisa Network
Iwe hausi wega, uye tinokoka kutora kwako chikamu mukuyedza kwedu kwekudzidzisa, nedzidzo. Ndokumbira utarise webhusaiti yedu kuti udzidze zvakawanda, uye svikira kuburikidza neKubata peji redu kana uchida kupindira kana iwe uchida chero rubatsiro.
Kune nhengo zhinji, InterConnect ndiyo yaive nzvimbo yekutanga yavakaona kuti havasi vega. Nekupa, iwe uri kuona kuti isu tinogona kuenderera mberi nekuvaka iyi inoshandura hupenyu nharaunda.
Pamwe chete, isu tinokwanisa kugadzira nyika inonzwisisa uye inombundira intersex vanhu sevanoshamisa vanhu vavari!
Intersex Vashandi Vanosundira Zvipatara kuti Vateedzere Kuvhiya Kusingaenzaniswi paVana
"Marissa Adams achiri mudiki, akaitwa oparesheni paBoston Children's Hospital kuti genitalia yake iite sepfungwa yechiremba" yechinyakare. " Kufanana nevakawanda se1.7 muzana yevanhu, Adams is intersex, akazvarwa aine kumwe kusanganiswa kwehomoni, chromosomal kana anatomical misiyano iyo inomuburitsa kunze kwebhuku rebhuku tsananguro yemukadzi kana murume. Uye senge chiverengero chinowedzera chevanhu vanoita zvebonde, akataura nezvekuvhiyiwa kwaakaitwa achiri mudiki kwazvo kuti azvinzwisise zvakamusiya achinetseka mupfungwa nekusingaperi. ”
Verenga zvimwe muchinyorwa apa: https://truthout.org/articles/intersex-activists-push-hospitals-to-ditch-nonconsensual-surgeries-on-children/
Intersex Kodzero dzevanhu Australia
Intersex vanhu vanoumba huwandu hwakasiyana hwevanhu vane mhando dzakasiyana dzemitumbi, hunhu hwepabonde, kupihwa zvepabonde, vanhurume, kuzivikanwa, ruzivo rwehupenyu, uye terminology uye kusarudzwa kweshoko. Izvo isu zvatinowirirana zvakafanana chiitiko chekuva nehunhu hwepabonde hunhu (senge ma chromosomes, gonads kana mahormone) akasiyana nemitemo yekurapa yemitezo yevakadzi kana yechirume. Isu tinotyira mhirizhonga, kushorwa uye maitiro anokuvadza nekuti miviri yedu inoonekwa seyakasiyana.
Intersex inyaya yekusiyana kwemuviri. Hunhu hwepabonde hwehukadzi hunogona kuoneka pachena, pakuzvarwa, panguva yekuyaruka kana pane dzimwe nguva. Intersex haisi yezvekurara pabonde; vanhu vane misiyano yema intersex vane zvakasiyana siyana zvebonde sevasingaiti ("endosex") vanhu. Intersex haisi yezve chiitiko chekuchinja kana kuzivikanwa kwevakadzi. isu tine akasiyana akasiyana echikadzi echikadzi seasinga-intersex vanhu. Intersex inonyanya nezve muviri, kunyange vanhu vehukadzi vanogona kuve nehunhu hunoenderana nehunhu hwedu uye hunhu hwepabonde. Izwi rekuti intersex rakatanga kushandiswa nesainzi mukutanga kwezana ramakore rechi20; kare, izwi rekuti "hermaphrodite" rakashandiswa. Izwi iri harishande kune mamiriro ezvinhu apo vanhu vanochinja nemaune maitiro avo eatomical.
Kunyangwe zviyero zvichisiyana, intersex vanhu vanomiririra yakakura muzana yevagari.
Intersex vanhu, kunyanya avo vedu vanoonekwa pakuzvarwa, muhucheche kana panguva yekuyaruka, vanowanzo kuve nyaya yekuvhiya kana mahormone kupindira "kugadzirisa" maitiro edu epabonde uye kuita kuti miviri yedu iratidzike zvakanyanya kuve mukadzi kana murume. Iko kuno kupindira kunoitika pasina wega, kubvumirwa kwakazara ruzivo iwo "maitiro anokuvadza"; ivo vachiri kutorwa se "kurapa" muAustralia, uye zvinowanzoitika kune "psychosocial" rationales, zvichibva pakiriniki "kutenda" uye "maonero". Tinoshora zvine simba kutyora kodzero idzi. Mukuita kudaro, isu tinotsigirwa nemhando dzakasiyana dzemasangano ekodzero dzevanhu nevamwe vanobatana.
Verenga chirevo chakareba kune intersex mune intersex kune vanobatana.
Tsvaga ruzivo rwekutanga rwevangangodaro vabereki nevabereki vevacheche vachangozvarwa, vana nevachiri kuyaruka.
Verenga pamusoro pekuvimbika kwemuviri, uye kubvisa maitiro anokuvadza
Verenga nezve eugenics, kuongororwa kwepabonde uye kubviswa
Verenga pamusoro pekusarura, kurwisa kusarura uye kushorwa
Verenga nezve magwaro ekuzvizivisa, bonde nevakadzi
Verenga huwandu hwevanhu kubva pagore guru ra2015 revanhu vakazvarwa vaine hunhu hwepabonde.
Verenga yedu gwara rezita pane terminology yevatapi venhau nevanyori.
Verenga dzimwe tsananguro dze intersex.
Verenga iyo Darlington Statement, 2017 yeAustralia neAotearoa / New Zealand chirevo chekubvumirana munharaunda yehukama hwehukama nezvehutano.
Verenga nezve edu ese mapepa ekupfupisa uye zvimwe zviwanikwa.
Intersex Justice Chirongwa
Iyo Yekupedzisira Intersex Kuvhiya Campaign
Tora chikamu mu #EndIntersexSurgery Campaign!
Iwe unogona kutora chikamu pa-line: Zvese izvozvi zviri pano!
Kuratidzira kusarura uye kukuvadza maitiro ekurapa ari kuitika pachipatara cheLurie Children kuchipatara chevana vevakadzi, uye kuda kupedzwa kwemaitiro aya akanzi inzira yekutambudza neUnited Nations uye yakapihwa mhosva neFizicians for Human Rights neWorld Health Organisation. , Iyo GLMA: Hutano Nyanzvi Dziri Kufambisira LGBT Kuenzana, nemamwe masangano mazhinji ekodzero dzevanhu Zvinoda
Veruzhinji Ruregerero - Kumbira ruregerero kuvhiya kusingachinjiki kunokuvadza kwakaitwa pavanhu vepabonde vasina mvumo.
End Interge Surgery - Rega kuita zvechiremba zvisina kukodzera 'cosmetic' maitiro pane intersex vana, senge kuvhiya kunoreva kushandura chitarisiko kana basa repabonde renhengo dzevacheche, eg clitoral kuderedzwa, kubviswa kweanoshanda testes, uye vaginoplasties. Kuvhiya kwakadai kunofanirwa kunonoka uye kungoitwa nemvumo izere yemurwere wepabonde. Zvichakadaro, vashandi vaLurie ve SDP (uye vese varapi vanoona intersex vana) vanofanirwa kuenda kunodzidziswa kwekushushikana kwakagadzirwa uye kufambiswa nevanhu ve intersex vanhu vatinosaina. Zvakare, varapi vanofanira kutanga kupa chinyorwa chakanyorwa, chakasarudzwa nevanhu mu #EndIntersexSurgery mushandirapamwe, kuvabereki vese vari kufunga kuvhiyiwa.
Kutsiva - Ipa rubatsiro rwekurapwa rwemahara rwusingamise kusiyana kwepabonde sematambudziko anofanira kugadziriswa. Izvi zvinosanganisira kupa mahormone uye rutsigiro rwepfungwa kune vechidiki vechidiki uye vabereki vavo.
Izvo Intersex Vanhu Vanoda Iwe Kuti Uzive Nezve Bonde | Vechidiki Vogue
Izvo Intersex Vanhu Vanoda Iwe Kuti Uzive Nezve Bonde
Clitorises anouya muhukuru hwakasiyana - hachisi chinhu chikuru
NA MADDIE ROSE
SAVANA OGBURN / REFINERY29 YEMAWERI MIFANANIDZO
Zvepabonde zvinofanirwa kunge zviri zvekunakidzwa, kuzadzikiswa uye kubatana. Asi kune vanhu vanoita zvebonde vane hukama hwepabonde husingaenderane zvakachena muzvikamu zvevanhurume kana zvevakadzi, panogona kunge paine zvipingamupinyi. Vamwe vanhu vepabonde vakapamhidzira maclitorises kana madiki madiki, muviri wakawedzera kana bvudzi kumeso, kukura kwepamuviri, kana kutadza kuita bonde rinopinda. Kunyangwe hazvo intersex vanhu vanoumba vangangoita 1.7% yevagari, vazhinji vevapombwe vasina kudzidza nezve miviri yedu. Vanoedza kutevedzera zvavakajaira kuita pabonde izvo zvisingawanzoshanda kwatiri.
Izvi zvinotiisa munzvimbo isinganzwisisike: udza vanhu ipapo ipapo nezve miviri yedu, kana tariro yekuti havabvunze? Ipa nhungamiro yekuti ungatiburitse sei, kana kuva nenguva yekunyepedzera pamubhedha? Kukura ndiine MRKH kuongororwa-chimiro chepabonde apo ini ndinoshaya nzira yemadzimai-ini ndinowanzo gura hookups ipfupi. Ini ndaisada kuti vanhu vazive nezve muviri wangu, uye ndainetseka kuti nditsanangure mafaro aindishandira.
Kutsvaga pabonde kunogona kuve kuri nani kune wese munhu pasina fungidziro yekuti muviri wemumwe munhu unofanirwa kuratidzika sei, maratidziro avanowana, kana kuti bonde rinotaridzika sei kwavari. Kunyangwe pakati pevanhu vane intersex, hapana miviri yevanhu miviri yakafanana. Hezvino zvinoitika zveane intersex nhengo dzeIntAct Vechidiki pane izvo zvavakadzidza nezve kwavo pabonde hupenyu, uye izvo vavakaroorana vanofanira kuziva. (enda kune iyi link kuti uverenge chinyorwa chose).
Izvo Kwakaita Kuve Intersex (YouTube vhidhiyo yakagovaniswa neBuzzfeed)
Fungidzira kuti ndeupi wedu ane testes?
Intersex Vechidiki Ekukurudzira Boka: http://www.interactyouth.org